DLL-Files Fixer 2.9.72.2521 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးလို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ windows မှာ ပျက်စီးနေတဲ့ Dll Files လေးတွေကို ပြင်ပေးနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Dll Files တွေကိုလည်း ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ DLL-Files Fixer ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... တစ်ခါတစ်လေ Game တစ်မျိုးမျိုးတင်လိုက်ပြီး ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ Dll Files လေးတွေပျက်နေတယ်ဆိုပြီး ပြတာမျိုးကြုံတဲ့အခါမှာ အဲ့ဖိုင်ကို ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက အွန်လိုင်းကနေရှာဖွေ ဒေါင်းလော့ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ပါဝင်ပြီး Mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Fix Dll Errors Safely and Easy in an Efficient Way. DllErrorsFix is the best choice for you to fix dll errors in one step which you can hold complete trust on. Get rid of unwanted dll errors that cause freezing, crashing or blue screen of death. Dll Error Free Scan
တစ် (၀မ်း) တစ်လုံးထပ်ရိုက်ထည့်ပေးပါမှ ဒေါင်းလော့လင့်ကို ရောက်ပါမည်ခင်ဗျာ...
DLL-Files Fixer System Repair Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အကိုရေ mediafireကဒေါင်းမရဘူး linkလေးပြောင်းတင်ပေးပါဦး